Imba Yeimba, Ruoko Rwakagadzwa Nhabvu, Cotton Baler - Tianda
Isu tinodzora kurudziro yemusha, tichibatanidza iro rekugadzira basa revanogadzira uye vagadziri kuvanhu nenzvimbo kutenderera pasirese Tiine zvitoro zvinopfuura zana uye vatengesi vefranchise munyika pfumbamwe, isu tiri nzvimbo yepasi rose kune fenicha yazvino uye yazvino, imba yekushongedza uye kushongedza zvinobatsira vanhu Kugamuchira Hupenyu Mu. Maitiro edu ehupenyu anopa hupenyu hwakafemerwa kuburikidza nemhando yepamusoro zvigadzirwa, zvakasarudzika dhizaini, uye masitayera echinyakare - zvese zvinofambiswa nedhijitari dhizaini uye ekuona maturusi ayo anopa musono kutenga zvitoro mu-chitoro nepamhepo.
Nzira iri nani yekutenga online fenicha, kushongedza kumba uye nezvimwe zvakawanda! Isu tinotora ruoko uye tinotora zvakanakisa muhunhu uye dhizaini iwe neimba yako. Nei uchipedza mazuva uchityaira kubva kuchitoro kuti uchengetedze kuyedza kuwana icho chakaringana chitarisiko kana chakasarudzika chidimbu. Tsvaga zvese zvauri kutsvaga uye zvimwe kubva kunyaradzo yeimba yako. Nemaumbirwo akasarudzika ekuvaka, enzvimbo yekuchengetera chitoro, uye nharaunda yepamhepo, isu tinosangana nevatengi vedu kuburikidza nevezvenhau, nharembozha, dhizaini dhizaini, registry yezvipo, nezvimwe.
Sports Chidiki Series Soccer Bhora Tsika Shi ...
Kukura 7 PU Laminated Leather Basketball neCus ...
Size 5 6 7 PU nedehwe tsika Logo customized ba ...
orenji rabha basketball bhora saizi 13567 yeou ...
Yepamutemo saizi 7 yakachipa ine mavara erabhasiketi bhora ...
Brown Ruvara PU PVC Tsika Logo Laminated Basket ...
Ndeapi maratidziro emachira? Iyo inonzi machira inoreva zvinhu zvemashizha zvakagadzirwa nemicheka yemachira. Jira micheka inogona kuiswa muzvikamu zvinoenderana nekushandisa kwavo uye nzira dzekugadzira. Zvinoenderana nechinangwa che ...
Chii chinonzi textile science? Sehunyanzvi hwesainzi, machira echidzidzo echimakanika (epanyama, echimakanika) uye emakemikari nzira dzinoshandiswa mune fiber musangano uye kugadzirisa. Vanhu kurarama, vekutanga kudya, wechipiri kupfeka. Kubvira kare ...
Ndeapi machira anoshandiswa kumidziyo? Sekureva kwemachira akasiyana, fenicha yakasimudzwa inogona kukamurwa kuita dehwe, chakagadzirwa nedehwe, jira, nezvimwewo Jira rematehwe akasimudzwa fenicha iganda remhuka ...
Ndeapi maratidziro emachira?
Chii chinonzi textile science?
Ndeapi machira anoshandiswa kune fu ...
Iko hakuna chinhu sekuona yekupedzisira mhedzisiro nemaziso ako pachako.